ပြည်သူတွေ မီတာဆောင်သင့်သလား၊ မီတာဆောင်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်က ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ၊ ပ… – PVTV Myanmar
ပြည်သူတွေ မီတာဆောင်သင့်သလား၊ မီတာဆောင်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်က ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ၊ ပြည်သူအများစုကရော မီတာဆောင်ကြရဲ့လား စတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူအချို့ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံကို ခံစားနားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ရော မီတာဆောင်ကြမှာလား …?
Like – 3.9K Share – 331
2021-06-11 at 7:02 PM
Aye Mya Khing says:
2021-06-11 at 8:02 PM
လတိုင်းတော့ မီတာလာစစ်တယ် ပြေစာလာပေးတယ်
ခွေးမျိုးတွေ ပိုက်ဆံ ပြတ်နေပီ
2021-06-11 at 8:34 PM
မဆောင်ရင်7လပိုင်ကြရင် မီးတာများလိုက်ဖျက်မယ်လို မီးဆောင်ပြီးပြန်လားသူက ပြောပြနေပါသည် အဲ့ဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာ please help
Win Pa Pa Bo says:
2021-06-11 at 8:41 PM
2021-06-11 at 8:54 PM
2021-06-11 at 9:42 PM
Aye Chan Say says:
2021-06-12 at 5:30 AM
They are threatening for not paying the electric bill. Burmese people, we have 50+ million population. We are in the majority. We know what to do. Feed them Dan Pauk if they threaten you.
2021-06-12 at 2:41 PM
Htun Htun Linn says:
2021-06-12 at 7:28 PM
ေဆာင္​ဖူးေပါင္​ဗ်ာ စစ္​ေခြးလီးထင္​တဲ့အထဲ ထိပ္​ဆုံးကေပါ့
Sezar Thuriza says:
မဆောင်တာသုံးလတော့ရှိပြီ အခုမီတာစာရွက်လာပေးတယ် သုံးလစာဆောင်ရတော့မယ် မဆောင်ရင်မီတာလာဖြုတ်မယ်ပြောတယ် အိမ်က G L ကသွားဆောင်ခိုင်းတယ်မီတာလာဖျက်မှာစိုးလို့တဲ့
ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေကလဲမညီဘူးသွားဆောင်တဲ့သူများတော့ lee တွေဖြစ်ကုန်ရော စိတ်ပျက်တယ်ဗျာ စောက်ကြောက်ကျွန်တွေနဲ့လူဖြစ်နေရတာ
2021-06-14 at 10:06 AM
Nann Lay says:
2021-06-15 at 5:24 PM
ႏိုင္ ႏိုင္ says:
2021-06-17 at 10:12 PM